Isifo sengqondo esixhalabisayo- kuQeqeshiweyo
Ukuqokelelwa kwamanqaku anxulumene nesifo sengqondo esixhalabisayo, ukusuka kuvavanyo kunyango
Ngaba ukudlala i-chess kunokuthintela isifo sengqondo esixhalabisayo?
Ngaba inkumbulo ye-episodic kunye nokuthetha ngokuthetha kakuhle kunokuqikelela ukwehla kwengqondo?
Imemori ye-episodic yomlomo kwizifo ze-neurodegenerative: i-aphasia eqhubekayo eqhubekayo. I-Alzheimer's
Ubunzima be-MCI kunye nokuvela kwengqondo ye-Alzheimer's dementia
Ukusuka kwi-MCI ukuya kwi-dementia ye-Alzheimer's: zeziphi iimvavanyo eziqikelelayo?
Impazamo engenazimpazamo kunye nokufunda kunye neempazamo zokufunda: ukuthelekisa phakathi kwezi ndlela zimbini kubantu abane-MCI ye-amnesic
Isifo sengqondo esixhalabisayo: Izinto ezinobungozi kunye nezinto zokhuselo